कुलमानले लोडसेडिङ हटाए, ओलीले कुलमान हटाए : डा. भट्टराई — Breaking News, Headlines & Multimedia
कुलमानले लोडसेडिङ हटाए, ओलीले कुलमान हटाए : डा. भट्टराई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको तीन वर्षे कार्यकालको उपलब्धीहरुको सूचिमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको विषय पनि समावेश गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले घिसिङलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदिएका कारण लोडसेडिङ हटाउने चुनौतीपूर्ण काममा सफलता मिलेको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुकेश काफ्ले लगायत प्राधिकरणका पूराना अनुहार हटाउन कांग्रेस सभापति देउवालाई कन्भिन्स गरेका थिए। यी सबै उपलब्धीहरुको जगमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो। लोकपाटीबाट
Tagsडा. बाबुराम भट्टराई लाेडसेडिङ